Musée du Quai Branly: hita mivantana ilay ranty | NewsMada
Musée du Quai Branly: hita mivantana ilay ranty
Fampirantiana maneho ireo mampiavaka an’i Madagasikara, toy ny kolontsainy sy ny zavakantony ny hetsika miseho ao amin’ny Mozen’ny Quai Branly – Jacques Chirac, nanomboka ny 18 septambra teo. Tsy diso anjara ny eto Madagasikara fa nahita mivantana izay zava-niseho tany an-toerana, omaly, teny Andraharo. Ranty nahitana ny sanganasan’i Temandrota sy i Pierrot Men ary i Mme Zo.
Fampirantiana ahitana sary, tabilao, sokitra, hairaha araka ny endrika amam-bika, sns, mahatratra 350, mitsinjara ao anatina fizarana telo lehibe. Ao ny maneho an’i Madagasikara tao anatina vanim-potoana naharitra. Ao anatin’izany ireo vakoka nisy tany amin’ny taonjato faha-19. Ny lohahevitra faharoa, ahitana ny fironan’ny Malagasy teo amin’ny tontolon’ny vintana. Tazana ao amin’ireo fitaovana ampiasaina ao an-trano, sy ny firafitry ny trano izany. Hevi-dehibe fahatelo ny fifamatorana eo amin’ny tontolo hita maso sy ny tontolon’ny maty.
… Anisan’ny maneho ireo rehetra ireo any an-toerana ny saripika nalain’i Pierrot Men, ny asa tanan’i Mme Zo eo amin’ny tontolon’ny lamba sy ny akora, toy ny zavamaniry, ny varahina, sns, ary ny hairaha araka endrika amam-bika sanganasan’i Temandrota.
Ny Fondation H ao anatin’ny Groupe Axian no mikarakara ity hetsika ity.